လင်းဦး(စိတ်ပညာ) _ Lin Oo: ကျွန်တော်နှင့် ဆရာ KEY
ကျွန်တော်နှင့် ဆရာ KEY
ထိုနေ့က ကျွန်တော် ဗို်လ်ချုပ်ကျွန်းမှ ထွက်လာခဲ့ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားသို့တက်ရန် ဘယ်ဘက်သို့ ဦးတည်လိုက်သည်။ ထိုအချိန် ကျွန်တော့်အနားသို့ Super Roof ကားနက်လေးတစ်စီး ထိုးရပ်လာပြီး " ဗျို့ အစ်ကိုရေ ဘယ်သွားမလို့တုန်း...၊ လမ်းကြံုရင် လိုက်ခဲ့လေဗျာ.." ၊ အသံကြားကာမှ သေချာကြည့်မိတော့ ကားဝပ်ရှော့လုပ်ကိုင်နေသော အသိတစ်ယောက် ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော်လည်း လမ်းကြံုတာနှင့် ကားပေါ်သို့ တက်လိုက် မိတော့သည်။
ကားပေါ်ရောက်မှ သေချာကြည့်မိတော့ သူတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်။ အသက်(၄၀)ကျော်အရွယ် ကုလားလူမျိုး တစ်ယောက် ရှိနေသည်ကို သတိထားမိလိုက်သည်။ "အစ်ကိုရေ.. အိမ်ကို လိုက်ခဲ့ပါဦးလား... ကျွန်တော်အခု အိမ်က မီးခံသေတ္တာပြင်ဖို့ သော့ပြင်ဆရာကို သွားခေါ်လာတာဗျ " ဟု မိတ်ဆွေက ဖိတ်ခေါ်လေသည်။ ကြည့်လိုက်တော့ မီးပွုင့်ရောက်နေပြီ ။ ရှေ့ဆိုရင် ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ ရောက်တော့မည်။ ကျွန်တော်လည်း အားနေသည်နှင့် အိမ်အလည်လိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သို့နှင့် ကျွန်တော်တို့ ရန်ကင်းသို့ ဦးတည်လာခဲ့လေတော့သည်။
"ဒီကအစ်ကိုက သော့စ်ပြင်ဆရာလား" ဟု ကျွန်တော်မှပင် တိတ်ဆိတ်မှုကို ဖြိုခွင်းလိုက်၏။ ကြည့်လိုက်တော့ ရွှေဂုံတိုင်မီးပွိုင့် မိနေ၏။ "ဟုတ်ပါတယ် " ဟု ပြံုးပြကာ ပြန်ပြောသည်။ "လုပ်စားတာ ကြာပြီလား အစ်ကို" ဟု ထပ်မေးလိုက်သည်။ "ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ဒါနဲ့ ထမင်းစားလာရတာ၊ လုပ်သက် (၂၃)နှစ်ရှိပါပြီ၊ ကျွန်တော့် အဖေကလည်း ဒီသော့ပြင်တာလေးနဲ့ပဲ လုပ်စားခဲ့တာ၊ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုကို ရှာကျွေးခဲ့တာပေါ့" ဟု ပြန်ဖြေလေသည်။ "ေဩာ်"ဟု ရေရွတ်ကာ အတတ်ပညာတစ်ခုနှင့် ဘဝဝမ်းကို ကျောင်းနေသူပါလားဟု စိတ်ထဲ တွေးလိုက်သည်။
သို့နှင့် ကျွန်တော်သည် သူ၏ ဇာတ်ကြောင်းအစုံကို မေးမြန်းမိလေတော့သည်။ တစ်နေ့ သော့ပြင်ဆရာခင်မျာ ဈေးဦးပေါက်အဖြစ် ၆ လမ်းမှ အိမ်တစ်အိမ်သို့ သော့စ်သွားပြင်ရလေသည်။ သူ သော့ပြင်ပြီး နောက်နေ့တွင် ထိုအိမ်အခိုးခံရလေသည်။ သိန်း(၄၅)သိန်းဖိုးလောက် ပါသွားသည်။ ရဲမှ လူစိမ်းဘယ်သူ အဝင်အထွက်ရှိခဲ့လဲဟု အိမ်ရှင်ကိုမေးရာ သော့ပြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ရှိပါသည်ဟု ဖြေ၍ ထိုသော့ပြင်ဆရာအား ဘာမှ ဖြေရှင်းချက်မပေးနှင့်၊ သံတံခါးနောက်သို့ ထည့်ထားလိုက်တော့သည်။ တစ်ပတ်ကြာမှ ထိုသူခိုးအား မိလေတော့သည်။ ထိုအခါမှ သော့ပြင်ဆရာ အပြင်သို့ ထွက်ရသည်။ အလုပ်လဲပျက် ၊ လူလဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ရလေသည်။ ဤကဲ့သို့လည်း ထောင်ထဲသို့ သော့ပြင်ဆရာ ၀င်ခဲ့ဖူးသည်။
လူငယ်တစ်ယောက်ကလည်း သော့တု လာလုပ်၏။ အပိုလုပ်ရန်ဟု ဆိုကာ ကိုယ့်အိမ်တွင်းမှ ပိုက်ဆံကို ခိုးယူတဲ့သူပင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုကဲ့သို့လည်း လူမိုက်အားပေးရာ ရောက်ခဲ့ဖူးသည်။
တစ်ခါတစ်လေ ဈေးဦး မပေါက်သော ရက်များကလည်း ရှိသေး၏။ သော့ပြင်ဆရာ၏ ဘဝကား မလွယ်ပါတကား ။ ဒီအပိုင်မှာ အိမ်ဖောက်ထွင်းမှုဖြစ်လျှင် ဦးဆုံး သူတို့လို လူမျိုးများကို ခေါ်ယူထိန်းသိမ်း ကြသည်။ မေးမြန်းစုံစမ်းကြသည်။ ဤသို့ ရာဇဝတ်မှုရေးရာတွင်လည်း ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် မေးမြန်း စစ်ဆေးခံရသည်။
တစ်ခါကလည်း သူက အာမခံသော့လုပ်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် သိပ်မကြာ ထိုအိမ်လည်း အဖောက်ခံရသည်။ နေ့ခင်းကြီးကို ဖောက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သော့စ်တစ်ခုလုံးကို ရစရာမရှိအောင် ထုနှက်ရိုက်ပြီးမှ ဖွင့်သွားခြင်းပင်၊ ဘေးတွင်လည်း အခန်းများရှိကြသည်။ သို့သော် ဘယ်သူမှ ဒီလောက်ထုနှက်ရိုက်သွားသည်ကို မကြားသည်ကို အံ့ဩမိသည်။ ထိုတစ်ခါတွင်လည်း သူ့အား ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ သူခိုးအားမိတော့မှ သော့ပြင်ဆရာအား ပြန်လွှတ်ပေးသည်။ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်နှင့် ထမင်းရှာစားနေရပေသည်။ ခိုးသည့်သူခိုးကလည်း သက်သက်မဲ့ လမ်းလွဲအောင် ပုံမှားရိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါလား ။
ရန်ကုန်မြို့တွင် မီးခံသေတ္တာဆိုင်အချို့သည် နိုင်ငံခြားမှ သွင်းသလိုလိုနှင့် ဒီမှာပဲ အင်ထုကာ မီးခံသေတ္တာလုပ်ကြသည်ကို ထိုသော့စ်ပြင်ဆရာမှ ရှင်းပြလေသည်။ တကယ်တမ်းမီးလောင်လျှင် လုံးဝ မခံကြောင်း၊ လောင်မှာပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ အရင်တုန်းက သုံးကြတဲ့ မီးခံသေတ္တာတွေမှာ တကယ်ကောင်းကြကြောင်း၊ (၂၄)နာရီ မီးလောင်ခံများပင် ရှိကြကြောင်း၊ အခုတော့ မြန်မာပြည်လုပ် အတုများ များပြားပါကြောင်း သိရသည်။
ကြည့်လိုက်တော့ ရန်ကင်း မိတ်ဆွေအိမ်သို့ပင် ကားက ချိုးကွေ့ဝင်နေပေပြီ။ သို့နှင့် ကျွန်တော်တို့သုံးယောက် မီးခံသေတ္တာအား ကြည့်ကြ၏။ သော့မှာ ပျောက်သွားခြင်းပင်ဖြစ်၏။ နံပါတ်သာ မှတ်မိပါသည်။ သော့ပြင်ဆရာကား နံပါတ်မေးသည်။ နံပါတ်သိရသောအခါ သူ့ခင်ဗျာ နံပါတ်အတိုင်း လှည့်ကာ သူ၏ သံချောင်း အမျှင်တန်းလေးနဲ့ သော့ပေါက်ထဲထိုးထည့်ကာ စမ်းနေလေသည်။ (၅)မိနစ်လောက် စမ်းပြီးသောအခါ " ချောက်"ဆိုပြီး တံခါးကို မယူလို့ ရသွား၏။ သူက လမ်းကြောင်းတွေ လိုက်ပြောင်းလိုက်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အရင်သော့ကို ပြန်တွေ့ပါက မီးခံသေတ္တာကို ဖွင့်လို့မရအောင် လုပ်ထားခြင်းပင်။
ဧည့််ခန်းတွင် ထိုင်ကြရင်း စကားပြောဖြစ်ကြသည်။ မီးခံသေတ္တာတစ်ခုတွင် သော့ပဲ ပျောက်ပါက ထိုသို့ ပြုလုပ်ရသည်။ သို့သော် သော့ပျောက်ကာ၊ နံပါတ်ပါ မမှတ်မိတော့ပါက သော့နှင့် မီးခံသေတ္တာကြားတွင် သံချောင်းတစ်ပေါက်စာ အပေါက်ကလေး ဖောက်ရသည်ဟု ဆိုသည်။ ဖောက်ရင်း နံပါတ်ကို လိုက်လှည့်ရ၏။ ဖောက်လိုက် နံပါတ်ကို လိုက်လှည့်လိုက်၊ နံပါတ်လုံးဝ လှည့်လို့မရတော့ဘူး၊ တင်းသွားပြီဆိုလျှင် ပွင့်ပါပြီ ။ အမှန်တော့ သော့နှင့် နံပါတ်အကြား ကြောကို ဖြတ်လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သံချောင်းလေးနှင့် လိုက်စမ်းသည် ဆိုသည်ကလည်း ပညာတစ်ခုပင်မဟုတ်ပါလား။ ဒါကလည်း အတွေ့အကြံု လုပ်သက်နှင့် ဆိုင်ပေသည်။ "ဖောက်ထွင်းတဲ့ သူခိုးတွေက တော်ကြပါတယ်၊ သို့သော် ကျွန်တော် လျှို့ဝှက်တစ်ခုပြောပြမယ်ဗျ၊ ဘယ်သော့ပြင်ဆရာမှ အိမ်ရှင်တွေရှေ့မှာ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပြီးအောင် မလုပ်ကြဘူး၊ ဒုံးဒုံး ဒိုင်းဒိုင်း ရိုက်ပြီး လုပ်ပြကြတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူခိုးတွေလိုပဲ လုပ်တတ်တယ်လို့ ထင်ကြမှာကိုး " ဟု ပြောလေသည်။ ဒါလည်း သူတို့ဘက်က ကာကွယ်မှု တစ်ခုပင် မဟုတ်ပါလား ။
သို့နှင့် ကျွန်တော်လည်း သိသင့်သလောက် သိပြီးသည် ဖြစ်သော်လည်း အားမရသေး။ ထို နံပါတ်မသိဘဲ စမ်းပြီးဖွင့်သည့် ယေဘူယျအသုံးချနည်းကို သိချင်၏။ ထို့ကြောင့် မရရအောင် နှိုက်ယူ မေးရလေသည်။ ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခင်ဗျာ သော့ပြင်ဆရာကို ထိုလောက်မေးနေ၍ အားနာနေသေးသည်။
**အာမခံသော့စ်ဖွင့်နည်း **(ထိုဆရာ Key ပြောပြခဲ့သော ဖွင့်နည်းသာလျှင် ဖြစ်သည်)
အာမခံ သေတ္တာကိုဖွင့်ရန် နံပါတ်(၄)ခုပါသော အတွဲဖြင့် ဖွင့်ရမည်။ အောက်ပါအတိုင်းဖွင့်ရပါမည်။
ဒိုင်ခွက်ကို ညာဘက်သို့လှည့်၍ နံပါတ်(30)ရောက်လျှင် ရပ်ရန် ၊အလယ်အမှတ်နှင့် အညီထား၍ (၄)ကြိမ်လုပ်ရန် ။
ဒိုင်ခွက်ကို ဘယ်ဘက်သို့လှည့်၍ နံပါတ် (83) ရောက်လျှင် ရပ်ရန်၊ အလယ်အမှတ်နှင့်အညီထား၍ (၃)ကြိမ်လုပ်ရန် ။
ဒိုင်ခွက်ကို ညာဘက်သို့လှည့်၍ နံပါတ်(48)ရောက်လျှင်ရပ်ရန်၊အလယ်အမှတ်နှင့်အညီထား၍ (၂)ကြိမ်လုပ်ရန် ။
ဒိုင်ခွက်ကို ဘယ်ဘက်ကို့လှည့်၍ နံပါတ် (88)ရောက်လျှင်ရပ်ရန်၊ အလယ်အမှတ်နှင့်အညီထား၍ (၁)ကြိမ်လုပ်ရန် ။
စလင်ဒါသော့ဂလောက်ထဲသို့ သော့သွင်း၍ ညာဘက်သို့လှည့်ပြီးဖွင့်ရန်။
မှားဖွင့်မိပါက အစမှ ပြန်လုပ်ရန် ။
သော့ပြင်ဆရာနှင့် ဇာတ်လမ်းကား ဤတွင် ပြီး၏ ။ ကျွန်တော့် ဘဝတွင် အမှတ်မထင်တွေ့ဆုံခဲ့သော၊ ဗဟုသုတရခဲ့သော အကြောင်းလေးပင် ဖြစ်သည်။ ဆရာKey သာ ကျွန်တော် ဤသို့ ဖောက်သည် ပြန်ချမှန်း သိလို့ကတော့လား........................။
By လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Thursday, December 18, 2008
သူခိုးနဲ့ သော့ပြင်ဆရာ ဘယ်သူက ပညာပိုတော်မလဲမသိဘူးနော်
Key ဆရာတွေက တော်တော်လေးကို တော်ကြတယ်နော်
အခုလို သော့ပြင်ဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို သိလိုက်ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ဘဝအကြောင်း တစေ့တစောင်းပေါ့နော်.....
အား တော်တော် ဗဟုသုတ ရသွားတယ်..
မေးတာ မြန်းတာ စိတ်ဝင်စားတာ ဂျာနယ်လစ်ဉာဉ်လားဗျိုး..
ဘယ့်နှယ်.. သော့ကို ထုနှက်ပြီး ဖွင့်သွားပါတယ် ဆိုမှ သော့ပြင်ဆရာကို ခေါ်ထိန်းသိမ်းရတယ်လို့ . . .
ပုံမပျက် ဖွင့်သွားတာမို့ဆို ထားပါတော့ . ..
အင်း .. လမ်းလွှဲတယ်လို့ စဉ်းစားမယ်ဆိုလည်း တစ်မျိုးပေါ့လေ..
ဘယ်လောက်လုံတယ် ဆိုဆို မလုံတာက မလုံဘူးပဲပေါ့နော်..။
ဖတ်နေတာ နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းရောက်မှ ပြံုးမိသွားတယ်။ ဆရာကီးသာ အွန်လိုင်းတက်လာရင် ကိုလင်းဦးကို တင်းတော့မှာပဲ။
တစ္ခ်ိန္က ဖတ္ဘူးခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတရ ဆောင္းပါလေးတစ္ပုဒ္ပေါ့ မောင္လင္းဦးရေ...
အခုခ်ိန္မွာ ကန္မြန္႔တစ္ေၾကာင္းကို ရဲရဲတင္းတင္းပေးႏိုင္ၿပီမို႔ ကေ်နပ္မိတယ္။